Suuq agoon xumeeyay maalintii ciidda oo xaalmarin bixiyay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka RUHMAA BENAHM
Image caption Ka dib markii agoontan dalka Ciraaq loo diiday in ay galaan suuqa laga dukaamaysto ee Baqdaad ku yaalla, hadda wuxuu ballan qaaday in uu damaanad qaadi doono konton agoon ah.
Ciidul Fitr ayaa ah maalin farxadeed oo dadku isu yimaadaan islana cunteeyaan, ka dib bil Ramadaan oo la soo soomanaa.
Balse markii 20 ilmood oo agoon ah ay galeen suuq ay dadka ladan ka dukaamaystaan oo ku yaalla magaalad Baqdaad ee dalka Ciraaq si ay uga soo cunteeyaan makhaayad loo sii qabtay oo halkaas ku taalla ayaa loo diiday in ay galaan.
Muuqaal laga duubay carruurta oo taagan bannaanka suuqa Mansour mall Sabtidii ayay dadka baraha bulshada isticmaala ee Ciraaq aad isula wadaageen, waxayna ku goodiyeen in aysan waxba ka gadan doonin.
Intaas ka dibna suuqa ayaa raaligalin bixiyay wuxuuna sheegay in ay ahayd is faham la'an shaqaalaha ah, waxayna ballan qaadeen in ay damaanad qaadi doonaan 50 agoon ah muddo sannad ah.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q فريق رحماء بينهم
مول المنصور يرفض ويستنكف استقبال الايتام الذين تم اصطحابهم من قبلنا لغرض رسم البسمة على وجوههم في اخر ايام رمضان ....... سوي مشاركة حتى تصل الرسالة
Posted by ‎فريق رحماء بينهم‎ on Saturday, 16 June 2018
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore فريق رحماء بينهم
Carruurta oo da'doodu u dhaxay toddobo ilaa 15 ayaa tagay suuqa Al Mansour mall iyagoo la socda dad mutadawiciin ah oo ka tirsan hay'adda samafalka agoonta ee Ruhmaa Benahm.
Suuqaas ayaa ah midka ugu wayn magaalada Baqdaad waxaana sannadkii 2013kii lagu dhisay 35 milyan oo doolar.
Hay'adda samofalka ayaa makhaayadda sii ballansatay ka dib markii shaqsi ku deeqay lacag carruurtaas bannaanka loogu sii qaado si ay farxadda ciida uga qaybqaataan.
Balse badalkii ay wakhti wanaagsan soo qaadan lahaayeen maalinta ciidda ah, bannaanka ayaa la tubay iyadoo ay qoraxdu aad u kulushahay ka dib markii ay waardiyeyaashu u diideen in ay carruurtu gudaha galaan.
Qof mutadawac ah oo Shariif la dhoho ayaa duubay muuqaal isaga oo sharaxaad ka bixinaya wixii dhacay baraha bulshada ayaana isla markiiba la galiyay, dadka baraha bulshada isticmaala ayaana aad uga xumaaday sida carruurta loola dhaqmay.
#waxba haka gadanina_ AlMansour_Mall erayo u dhigma o oaf carabi ah ayayna dadku adeegsadeen ku dhawaad 12,000 oo jeer, muuqaalkiina waxaa daawaday in kabadan 500,000 oo jeer.
Dad badan oo reer Ciraaq ayaa sheegay in dhacdadaasi ay muujinayso "bannii'aadminimo darro".
Dadka qaar waxay billaabeen in ay maleeyaan sababta carruurta loogu diiday in ay galaan suuqa, iyaga oo tilmaamay in muuqaalka carruurta iyo sida ay u labisnaayeen uu u keeday "mid aan munaasab ku ahayn" suuq sida Al Mansour oo kale ah.
"Bal ka warran haddii miiska lagaa laabta laguuna diido in aad soo gasho, iyadoo lagu sababaynayo qaabka aad u labisan tahay?" yaxxe nin la dhoho ayaa su'aashaas waydiiyay maamulka suuqa.
Si kastaba ha ahaatee qaar kale ayaa meesha ka saaray in carruurta loo celiyay qaabka ay u labisnaayeen iyo heerka noloshooda, waxayna ku doodeen in suuqu uu buux dhaafay oo meel lakala istaago la waayay.
Xuquuqda Sawirka @y007e @y007e
Qof kale ayaa soo qoray haddii carruurtaas agoomada ah aabayaashood oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen askartii ku dhimatay dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka in suuqan uusan jireen.
Axaddii ayuu Saad Al Kurdi oo ah masuulka suuqa soo duubay muuqaal uu raaligalin uga bixinayo dhacdadaas, wuxuuna sheegay in ay dhacday is faham darro.
Agoonta Turkiga ee ku xanniban Ciraaq
Kontonka ilmood ee ay damaanad qaadayaanna wuxuu ku daray in ay ka mid noqon doonto cunto, dhar iyo waxyaabo kale oo suuqa laga siin doono.
Maadaama oo hadda ay arrintii wanaag ku soo dhammaatayna carruurtu waxay rajayn karaan ciid farxad leh meesha lagu gaaro sannadka 2019ka.